आशिक साह को रोमान्टिक कथा ‘परि’ Part6❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - CHHEPARO
April 28, 2017 lchapagain4@gmail.com परि'-6 0
परी ” A RomantiC love Story “
गोरी नै थिइ उ । नाक अलि चुच्चो परेको । थाइ कट कपाल । अनुहार भरी छरिएको । निदाएको ले उसकी आखा देख्नु सकिन ।
तर उसकी अमृतमय गुलाफी अोठले मलाइ लोभयाउनु थाले । उसकी अनुहार उदभासित भएको थियो सायद बतिको प्रकाशले होला ।
अनि मेरा आखा उसकी टिमिक्क तनकेको छाती तिर नै बढी केन्द्रित थिए । अचानक उ कोल्टे परी । उसले अोढेको सिरक भुइ मा झर्यो ।
अनि उकुसमुकुस गर्नु थाली । उसले लगाएकी टी- सर्ट माथी सरेर । उसकी नाइटो देखिनु थाले । मलाइ त यसै डर लागेर आयो । मैले उसलाइ हेरेको उसले चाल पाउँदा के भन्छे होला । डर ले म फेरी विपरीत दिशा तिर फर्केर निदाउने प्रयास गर्नु थाले ।
तर निन्द्रा कहाँ लागुन र ? , मस्तिष्क मेरा मात्र उ तिर आकर्षित थियो । भने मनलाइ पनि उसले एकैछिन मा चोरी सकी । फेरी कोल्टे उसकै अनुहार तिर ।
र आखा लाई उसकी अोठ मै केन्द्रित गरे । हाइ क्या रसिलो रैछ । बिस्तारै हातले छुनु मन लाग्यो । तर डरले मलाइ असमर्थ बनाइ रहियो । हेर्दा हेर्दै म लठ्ठीनु थाले उसकी शरीरको सुगँधमा । र अचानक म भित्र केही भयो । म बिस्तारै आफ्नो अोठ उसकी अोठको नजिक लानु खोजे कि । जोरले बादल गर्जियो उ फेरी मेरो अँगालो मा टासिन् । उसको तातो शबाँस लाई म आफ्नो श्बाँस मा महसुस गर्दै थिइ । भित्र यसै उसकी वैश ले मलाइ पघलाउनु थाल्यो । राखे एउटा खुट्टा उसकी खुट्टा माथी । उ अझै मौन थिइ । आखा पनि बन्द नै थियो । उनले मलाइ कही कतै रोकेनन् । मेरो हिम्मत अझ बढ्यो । एउटा हात उसकी गाला मा राखे । अझै मौन रही उ ।
अनि म आफ्नो अोठले उसकी अोठलाइ किस गरे । एक्कासि उ आखा खोलीन् । सायद सुतेको नाटक गर्दै थिइ । मलाइ त डर लाग्यो । भित्र मुटुको धुकधुकी बढ्यो ।
तर उसले केही भनिन । उसकी आखै भरी मादक छाएको थियो । अब उ आफै म सँग टासेर । आफ्नो अोठले मलाइ मेरो तल्लो अोठ मा किस गरि । हाइ क्या सफ्ट किस थियो त्यो ।
म त पुरै उत्तेजित भए र पुरै रोफ्ली तरिका ले किस गर्नु थाले उसलाइ । गाला , घाटी , अोठ , निधार कतै बाकि राखेनन् मेरो अोठले । एउटा हातले उसकी हरेक अङग् लाई स्पर्श गर्दै थिए । त अर्को एउटा हात उसकी छाती सँग नहु खोज्नु थाल्यो । उ अलि पीडा भएको अवाज निकालिन । मलाइ भने कुनै अर्कै सँसार को यात्रा गरे झै महसुस भयो । बेग्लै मज्जाले छोयो ।
एकछिन पछि उ आफै मेरो सर्ट को टाँक खोल्नु थाली र मैले पनि उसकी टि सर्ट निकाले । अनि पुर्णरुपले एकअर्कामा सम्माहित भए । पसिना पसिना भएको थियो हाम्रो शरीर । उ भने बिचबिचमा जोेरले अान्नदको सितकार पनि लिदै थिइ । पहिलो पटक चरम आन्नद पाएको थियो जिवनमा । जसको अभास कुनै जोडीलाइ मात्र हुन्छ । केही बेर को रमाइलो पछि । उ मेरो छातीमा जोरले टासी र म सिरक तानेर निदाए ।
बिहान को4बजे को हुदो हो । मेरो आखा खुल्यो । आखा खोल्दा उ मलाइ यसरी समातेकी थिइ । मानौं बाल्यकाल मा बाआमाले कुनै मेला बाट ल्याइ दिएको खेलौना ।
जसलाइ अरूले खोस्ला कि भन्ने भयले । बच्चाहरूले आफु शीत लुकाएर राखेका हुन्छन् । मलाइ एकछिन आफु कहाँ छु भन्ने ठम्याउनु नी गाह्रो भयो । अनि गएको रातीको घण्टा । मेरा मस्तिष्क मा सिनेमा का दृश्य झै एकएक गरी अोर्लिनु थाले ।
उसको हात आफु बाट छुट्टाएर फ्रेस हुन गए । बाथरुम बाट फ्रेस भएर आए पनि । उ अचेल मस्त निन्द्रा मा थिइ । उसकी अनुहार लाई हेरे । उ खुबै प्यारी लागि मलाइ ।
उसकि खाटमा बसे । र एउटा हात उसकी गालामा राख्दै । किस गरे उसकी निधार मा साथै गुड मर्निङ पनि भने । उ उकुसमुकुस गर्दै एउटा हातले मेरो हातलाइ जोरले समाती ।
अनि उ अोढेको सिरक अलि तल झर्यो । यसो सिरक तिर ध्यान दिदा । रगत को दाग देखियो । म निकै आतिए । यत्रो रगत कहाँ बाट आयो ? मनमनै सोच्नु थाले । अनि थाहा पाए सायद उसकी पहिलो चोटी भएको हुनु पर्छ ।
र पहिलो चोटी मा रगत बग्नु स्वभाविक नै हुन्छन् । सिरक तानेर उसलाई अोढाइ दिए । र वाइ भनि जानू खोजे । उ बाइ सुन्ने बितिकै खुत्रुक्क उठी । अनि मलाइ पछाडी बाट जोरले समाती । र आफ्नो अोठ मेरो अनुहार सम्म ल्याउदै मेरो गाला मा किस गरि र भनि प्लिज नजाउन् ।